ezi site k
Dang! Site Bill Quinby
Na-arụ ọrụ zuru okè. M despaired banyere faịlụ mgbake. N'ịbụ ndị na n'etiti a foto okike zaa dị ukwuu ruo mgbe ị see siri ike brik mgbidi nke a malfunction gị diski agụ ma ọ bụ diski. Gaa ozugbo na obi nkoropụ, adịghị anakọta $ 200. M na-agbalị ọzọ software na ọ dara wezuga, na-agwa m na m pụrụ ịdị mkpa psychiatric ndụmọdụ ka chere na m pụrụ naghachi ihe Site na CF kaadị. Wondershare Data Recovery Kụrụ ya oge mbụ. Onye ọrụ interface bụ obere tricky ghọta, ma otu ugboro m kwubiri ya, voila! M a obi ụtọ shooter! Ekele.
dị nnọọ mma site Marcus
ezi site leung
NDỤ nchekwa site A
M adịkarịghị ịhapụ ihe ndị a na ụdị na ngwaahịa, ma m n'ezie mkpa igosipụta m sikwa ele ekele na ekele ka m natara efu faịlụ m na e na-achọ, n'ihi na ihe karịrị otu izu !!! Nke a bụ ihe dị nnọọ mkpa faịlụ m mere n'ihi na ọrụ, na mgbe m chere na m furu efu ya maka ezi Echere m na m ga-chụọ n'ọrụ n'ihi na n'aka. M enweghị iCloud ma ọ bụ Time Machine ọrụ otú ahụ ka m maara na m bụ screwed. Daalụ maka azọpụta m site ngụkọta mmechuihu / ndakpọ olileanya!
Dị ka Magic site Mahammad Bakhishov
Ahụtụbeghị m siri ike otú ahụ data mgbake ngwá ọrụ na a nnọọ ogologo oge. Ọ na-arụ ọrụ dị ka anwansi na ya mfe iji interface na zuru ezu mgbake. Oké ngwaahịa!
ndụ nchekwa site pro Patel
kasị mma ngwaahịa mgbe! ọ zọpụta ndị niile dị mkpa foto m mkpa ime m ụlọ nyocha ọrụ ndị na-na mberede ehichapụ!
N'ezie bara uru site purav Patel
M ebudatara a na-agbake foto na m nwere na mberede ehichapụ na ekwentị m na m nwetara ha niile azụ. oké ihe, n'ezie atụ aro ya.
Data mgbake ngwaahịa nyochaa site Jessie Kaulitz
App bụ n'ezie dị ike na-bara uru. Ga-amasị ịgwa a na-enyi m niile! Ọ enyere m aka n'ezie na m data mgbake maka faịlụ m na mberede ehichapụ!
Na Mbụ 1 2 3 4 5 6 Next